လသာတုန်းဗိုင်းငင်နိုင်ဖို့ – Live the Dream
ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘဝမှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့အခွင့်အရေးကောင်းလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ကိုမျှော်လင့်ဖူးကြတယ်မလား။စာမေးပွဲတွေမှာရမှတ်ကောင်းပြီး ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အခွင့်အရေးရချင်တာ၊ ကောင်မလေးနဲ့နီးစပ်ဖို့အခွင့်အရေးရချင်တာ၊ လစာဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရဖို့ အခွင့်အရေးရချင်တာ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာရာထူးတိုးဖို့အခွင့်အရေးရချင်တာ၊ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ တည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အရေးရချင်တာအစရှိသဖြင့် အခွင့်အရေးတွေရဖို့ကိုပဲ မျှော်လင့်နေတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် အဆင်သင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်လွှတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုးစားရဲ့သားနဲ့တောင် အခွင့်အရေးမရလိုက်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မင်မင်အနေနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်လဲ? ဘာလုပ်ရမှာလဲ? ဆိုတာကို ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်။ Live The Dream ရဲ့ စာဖတ်သူတွေမှာလည်း မတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်ကောင်းလေးတွေရှိနေနိုင်တာမို့ အခွင့်အရေးတွေ ဖမ်းဆုပ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးနော်….
တကယ်တော့အခွင့်အရေးဆိုတာ အထူးတလည် ရှာဖွေနေစရာမလိုတဲ့အရာပါ… ကိုယ့်မှာသာ အရည်အချင်းတွေ ပြည့်ဝနေရင်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ မှန်ကန်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့ပါပဲ။ မှန်ကန်တဲ့အရည်အချင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတော့ ကိုယ့်သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်း၊ နယ်ပယ်ကိုတော့အရင်ဆုံး သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှလည်း လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ မြင်လာပြီး ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ ရေကူးချန်ပီယံဖြစ်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်က သက်လုံကောင်းကောင်းနဲ့နည်းစနစ်တကျ ရေကောင်းကောင်းကူးတတ်ဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အရည်အချင်းတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာမှမသိ.. ဘာမှမလုပ်ပဲ ထိုင်ပြီးငြီးတွားနေလို့တော့ အခွင့်အရေးတွေကကိုယ့်ဆီကိုသူ့အလိုလိုခြေထောက်ပေါက်ပြီးပြေးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းမှာလိုအပ်မယ့် မှန်ကန်တဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ အတူ ဘာသာစကားအရည်အချင်း၊နည်းပညာအရည်အချင်း၊လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအရည်အချင်းစတာကို ကိုယ့်ဘက်က ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုသာ ပိုပြီးနှစ်သက်ခုံမင်လေ့ရှိကြတယ်။ တခါတလေတော့ အဲ့လိုComfort Zone တွေထဲမှာ စီးမျောသာယာနေမိပြီး ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေရှိလာဖို့ ကြိုးစားရမှာကိုတော့ သတိမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအချက်ကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို အခွင့်အရေးကောင်းတွေနဲ့ ဝေးရာဆီဆွဲချသွားတာပါ။ သူမတူတဲ့အခွင့်ရေးကောင်းတွေကို ရယူလိုတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုသာယာငြိမ့်ညောင်းပြီး တိုးတက်မှုမရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကို ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ကြိုးစာရပါမယ်။ အောင်မြင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေတိုင်းက သူများနဲ့မတူပဲရေဆန်ကိုကူးခတ်ခဲ့ကြတာပါ။ အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုအခက်ခဲတွေကို ရင်ဆိုင်အံတုမှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ရယူလိုတဲ့ အခွင့်အ‌ရေးကောင်းဆိုတာတွေကို ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်မှာပါ။ လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးတာတို့ comfort Zone မှာ မျှောနေတာတို့က အခွင့်အရေးတွေနဲ့ နီးစပ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ တစ်နေကုန်ဖုန်းသုံးရင်း အချိန်ကုန်သွားတာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်လည်ရင်း အချိန်ဖြုန်းတာ စတဲ့ဒီလိုအချက်လေးတွေကို ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေထဲကနေလျှော့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါနော်.
မင်မင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများများစားစား မရှိခဲ့ပါဘူး။ အသင်းအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်တာတွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ပါဝင်မှုအားနည်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်လာတဲ့အခါ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပေါပေါများများရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတော့ နည်းနည်းတော့ နောင်တရမိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ ကောင်းများစွာရှိခြင်းက ဘဝမှာ အခွင့်အရေးကောင်း၊ အမှတ်တရကောင်းတွေကို ပိုမိုရရှိလာနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ ရန်ဖြစ်ကြ၊ စိတ်မခန့်မသင့်ကြဆိုတာမျိုးလေးတွေ ရှိတတ်ကြပေမယ့် အရေးကြုံလာတဲ့အခါကျ ကိုယ့်မိသားစုအသိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးတွေထက်တောင် ပိုပြီးရင်ဖွင့်တိုင်ပင်လို့ကောင်းတဲ့သူတွေပါ။ မတူညီတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမျိုးမျိုးဆီကနေမှ မတူညီတဲ့အတွေး၊ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ စသဖြင့် အပြန်အလှန်နှီးနှောဖလှယ်ရင်း တွေ့မြင်ရလာနိုင်မှာဖြစ်သလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို မြင်တတ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ
လူတိုင်းကအောင်မြင်မှုအခွင့်အရေးကောင်းတွေရဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်… အဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုချပြနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုမြင်တတ်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့နေရာဒေသမှာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းတဲ့အရည်အချင်းတွေရှိနေပါစေ…ဒီအရည်အချင်းတွေကိုချပြနိုင်ဖို့အတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုမှာရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအခွင့်ရေးကောင်းတွေရလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက တစ်ရွာလုံးသက်သက်လွတ်စားတယ့်ရွာမှာ အသားငါးသွားရောင်းလိုမရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ မိမိကြိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာဒေသမှာ ရှိနေဖို့ကလည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်နော်….။
@Shal Wai Yan